China Yakasimbiswa Yakagadziridzwa Polyvinyl Chloride (MPVC-SR) Isiri-kuchera Kutaurirana Pipe fekitori uye vagadziri | Shengyang
Yakasimbiswa Yakagadziridzwa Polyvinyl Chloride (MPVC-SR) Isiri-kuchera Pipe Yekukurukurirana Pipe
◎ Yakasimbiswa yakagadziridzwa PVC (MPVC-SR) isiri-yekuchera yakatsaurwa yekutaurirana pombi yekuviga
Parizvino, mukutaurirana asiri ekuchera mapurojekiti, maPI mapaipi uye mapaipi epasilon epakati anonyanya kushandiswa. Chizvarwa chitsva cheisiri-yekuchera yakatsaurwa pombi MPVC-SR yakagadzirwa nekambani yedu iri pamusoro pePipe pombi uye nesilicon yepombi pombi maererano nekuita, nzira yekubatanidza, mutengo wekutenga uye kutakura.
◎ Yakanaka kwazvo kuramba yakaderera tembiricha zvazvinoita
Iyo chubhu yakaiswa mufiriji ye15C, uye iyo bvunzo yekukanganisa yakaitwa mushure mekutonhora kwe1H pasina kutsemuka. Inobatanidza uye yekupedzisira-yakasimba-simba kubatanidza inotora yakakosha glue kubatana, iri nyore kubatanidza, uye simba rekubatana rakakwirira kupfuura simba repombi pachayo.
◎ Flame retardant, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kudengenyeka kwenyika
MPVC-SR pombi haina moto uye inodzima yega, uye kuita kwayo murazvo kunodarika mwero weV0, iyo inobatsira kwazvo kuchengetedza moto. Iyo mbishi zvinhu zvine hutsanana uye zvakatipoteredza zvine hushamwari polymer zvinhu uye zvinowedzera. Iyo pombi inopinda muvhu uye haina kusvibiswa kune zvakatipoteredza uye ivhu. Pombi yakavigwa kusvika pakadzika zvina-zvishanu zvehupamhi hwekunze hwepombi, uye chimwe cheshanu chechipenga chekunze chepombi chinoonekwa nekunze.
◎ Ngura uye kuchembera kuramba
Iyo mbichana zvinhu zveMPVC-SR pombi inonyanya calcium calcium carbide, iyo yakagadzikana mumutengo uye yakaderera mumutengo; kukanganiswa kwaro kukoshesana kuri 0,25-0.35, rusvingo rwemukati rwakatsetseka, kurwisa kwekudhonza idiki, uye iyo yekunze-kutenderera iri pasi pe 1-3%. Iko kuita kwemutengo kuri nani kupfuura HDPE pombi uye nesilicon yepombi pombi.
Construction Yakakwirira uye inovaka kuvaka uye kugadzikana
MPVC-SR pombi inosangana nezvinodiwa zvezviitiko zvakakosha uye inokodzera nzvimbo dzekuvakira dzine madziro, dzimba nezvimwe zvivakwa, izvo zvinogona kusunganidzwa zvichidhonza. Uye hapana magetsi anodiwa kuti ubatanidzwe kana kugadziriswa, uye masisitimu akakosha eglue anogona kushandiswa zvakananga kubatana mukati tembiricha yemukati, inochinjika uye nyore.
Hdpe Porous Grid Kutaurirana Pipe